Igumbi laBucala kwi-Villa encinci CIR: 097048-CNI-00003 - I-Airbnb
Igumbi laBucala kwi-Villa encinci CIR: 097048-CNI-00003
Indlu ibekwe kwindawo ezolileyo nenoxolo kwaye igumbi linempahla enkulu kunye nebhedi yesiFrentshi (oko kukuthi, isikwere esinye nesiqingatha).
Ukuhlala ixesha elide kwamkelekile kwaye iindwendwe zinethuba lokusebenzisa ikhitshi ngaphandle kweengxaki ngesicelo.
Ngaphaya koko, kuyenzeka ukupaka imoto yakho ngaphandle kwendlu kwindawo yokupaka enkulu ekufutshane.
Iitawuli, amashiti kunye nesidlo sakusasa zibandakanyiwe kwixabiso.
Indlu ibekwe kwindawo yobuchule, ngakumbi inzuzo kwabo banemoto kunye nohambo lwemini.
Ngapha koko, kunokwenzeka ukuba undwendwele iindawo ezahlukeneyo ezinomdla: ukuncoma i-panorama yeLake Como, undwendwela iLecco kunye neBellagio, uthathe ipiknikhi kwiLombard Prealps, okanye ukhethe utyelelo lwembali-yenkcubeko kwesinye sezixeko ezikhulu kule ndawo - Milan, Bergamo okanye Monza..
Ukuba awunamoto, uninzi lwezi ndawo zisaza kufikeleleka lula ngololiwe; ukusuka kwindawo yokumisa ibhasi iimitha ezimbalwa ukusuka kwindlu (kwi-Via De Gasperi) kwaye ufika kwisikhululo sikaloliwe saseCernusco-Merate, malunga neekhilomitha ezi-3, kuya kwenzeka ukuba ufike kwiindawo ezibaluleke kakhulu usebenzisa izithuthi zikawonkewonke.
Ubumelwane apho indlu ikhoyo yindawo ezolileyo kunye ne-rustic - kuyenzeka ukuva ingoma yeentsimbi kumgama kwaye iindlela zokungena ebumelwaneni zincinci kwaye zinde, eziqhelekileyo kwiidolophu zaseBrianza.
Ndizakubakho ekhaya ixesha elininzi kwaye iindwendwe zisoloko zamkelekile ukuba ziqhagamshelane nam ngolwazi kunye / okanye iinkxalabo phambi nangexesha lokuhlala kwazo - nokuba ngeselfowuni xa ndingekho ekhaya ngexesha elithile.
Inombolo yomthetho: CIR-097048-CNI-00003
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Merate